Nahazendana, dia hafa no nisoratra tamin'ilay tany rehefa niala tamin'ny SEIMAD ny tany, izay ity farany indray no nisera tamin'ity mpanam-bola ity, ary dia niafara tamin'izao fandravana ny trano sy fakana ny tany nipetrahana efa 50 taona izao.
Efa vita ihany koa ny taratasy fanorenana avy amin'ny Kaominina, ka avy hatrany dia niroso amin'ny fanorenana ity nahazo ny tany ity.
Nilaza ny hitory moa ny nipetraka tamin'ny tany, satria raha ny filazany dia nisy hosoka sy kolikoly avo lenta izao raharaha nakana ny tany sy nandravana ny trano izao. Nilaza ihany koa izy ireo fa hitondra ny raharaha eny anivon'ny Bianco, satria ahian'izy ireo ny tsikombakomban'ny mpiasa eo anivon'ny SEIMAD amin'izao raharaha izao.
Nihaodihaody teo an-toerana moa ny olona heverina fa nahazo izao tany izao, na tsy tokony niatrika izany aza izy raha ny lalàna mifehy ny asan'ny vadintany. Tsy nahazoana ny heviny kosa izao rahahaha izao, satria na ny mpiasa miasa eo aza tsy milaza iza no nahazo izao tany izao.